Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ na Beljọm Thorgan Hazard Childhood Story Plus Ihe Ntinye Ucheld Biography Eziokwu
Anyị Thorgan Hazard Biography na-enye akụkọ zuru ezu banyere Akụkọ nwata, ndụ ya, ndị nne na nna, Eziokwu ezinụlọ, nwunye, ụmụaka, ndụ onwe onye na ndụ ya. Ọ bụ nyocha nke akụkọ ndụ ya zuru oke, site na mgbe ọ bụ nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Ee, mụ na gị maara nwanne ya nwoke nke obere Eden bụ Chelsea Legend, ọ bụkwa onye akpọrọ aha otu onye ndị kasị mma na-ebuso ndị egwuregwu bọọlụ ọgụ na European Football.
Agbanyeghị, ọ bụghị ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ echebarala ịgụ Thorgan Hazard's Biography, nke na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ya. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Akụkọ nwata bụ Thorgan Hazard:
Maka ndị mbido, aha ya zuru ezu bụ 'Thorgan Ganael Francis Hazard'. A mụrụ Onye Ọkachamara Ahụike Onye Belgium na ụbọchị 29th nke Mach 1993 na nne ya, Carine Hazard na nna, Thierry Hazard, n'obodo La Louvière, Belgium.
Thorgan bụ nwa nwoke nke abụọ na nwa nke ụmụ nwoke anọ, nke a mụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya. Ma nne ya na nna ya nwere ike ịbụ ndị nọ n'afọ 50 na ụma.
Little Thorgan toro na ụmụnne ya nwoke, Eden (nke okenye), Kylian (nke dị obere) na Ethan Hazard (nke ọdụdụ). Amuru umu nwoke nile n'inwe ebumnuche ebum n’ulo ndi umuaka, ndi oru ha malitere ndi muru ha.
Thorgan ji afọ ndụ obi ụtọ ya kachasị ukwuu, ọkachasị ihe dịka ụmụnne ya abụọ - Eden na Kylian. Site n’ịzụlite ezigbo nne na nna, a chọpụtara na ụmụnne ndị ahụ nwere mmekọrịta dị mma maka ihe ndị yiri ya.
N'ihe banyere ịbịaru otu ihe ahụ, superio meta mere maka Zidine Zidane, ha mekwara ya ka ọ bụrụ iwu na ndị mụrụ ha ịzụta Legend's No: 10 uwe elu French, otu, maka onye ọ bụla. Na mbido, ha kwetakwara ibuso ndị ọgba bọọlụ ọgụ- nke ha ga-eme ugbu a.
Mụrụ ezinụlọ Thorgan Hazard:
Ọ bụ ihe dị mma ịhụ ndị nne na nna bụbu ndị na-agba ụkwụ, na-achọ ka ụmụ ha nọgide na-ebi nrọ ha. Na-enweghị mkpebi ahụ, ụwa taa agaghị eme ememme Hazard ezinụlọ nke bụbu otu ụlọ ụlọ otu oge.
Obi abụọ adịghị ya, ndị nne na nna Thorgan Hazard, Carine na Thierry nwere ịgba ọsọ ụwa na football. Site na mmalite, ha enweela nnukwu atụmatụ maka ụmụaka ha. Ma nne ma nna bụ ụdị ndị ekweghị na ịmanye ụmụ ha ọrụ ịgba bọl.
Na-eche echiche nke ịcha Zidane jerseys, Thorgan na ụmụnne ya nwetara ihe niile ha chọrọ n’aka nne na nna ha, ha niile n’aha na-ekwupụta. Ha niile tolitere na gburugburu ebe a na-eme egwuregwu bọl na Thierry ya na nwunye ya (Carine) bụ ụdị ndị ga-aga ogologo njem iji hụ na ụmụ ha nwoke nwetara ihe ha chọrọ. Laa azụ n'oge ahụ, ọ dị ka ịnya anyịnya igwe bụ otu n'ime ihe ntụrụndụ mbụ ha - ọzọ, ha mere otu ahụ.
Thorgan Hazard Eziokwu sitere na:
Ee, anyi niile mara nwanne nke Eden the Chelsea Legend, nke si Belgium. Ọzọkwa, na ezinụlọ Thorgan sitere, nyocha mere ka anyị ghọta na ọ si na mpaghara Ndịda nke Belgium na ezinụlọ ya so n'òtù agbụrụ ndị ọcha nke Belgium.
N'ihe banyere ezinụlọ si Thorgan Hazard, nna nna ndị Bel bụ nke Wallonia Ancestry. Nke a bụ mpaghara a na-asụ French nke Belgium nke ndị mmadụ bi na gburugburu 55% nke ókèala obodo ahụ.
Thorgan Hazard na-etolite Afọ:
Mgbe onye na-agba bọọlụ na-eche echiche banyere ncheta nwata kachasị amasị ya, ọ na-echeta akụkụ kachasị mma. Ncheta Thorgan kachasị na nwata bụ mgbe ọ na-egwu bọọlụ n'ubi ezinụlọ ya n'akụkụ nwanne ya nwoke nke okenye (Eden) yana ụmụ nwanne ya. N’okwu Thorgan;
Mgbe anyị dị obere, agaara m ebe mgbaru ọsọ ma Eden na ụmụ nwanne nne m ga-agbagbu m dị ka ndị ara.
You maara?… Dịka nwata, Thorgan nwere nwa mgbe ịbụ onye mgbaru ọsọ. O mechara ghọta na iguzo n’elu ọkpọ ọkpọ na-agwụ ike. Ọzọkwa, eziokwu ahụ bụ na ọ toghị ogologo. Obi dị m ụtọ na ezigbo nwanne na Eden Hazard nyere aka.
Dịka a tụrụ anya n’aka nwa nwoke ọ bụla na nwa ọ bụla, Eden Hazard weghaara ọrụ dịka nnukwu nwanne nwoke nke onye nlere n’edu. Ọ bụ ya kwesịrị ime ọtụtụ ihe maka Thorgan. Site na nmalite, ụmụ nwoke abụọ ahụ na-achọkarị ka ndị nne na nna ha dị mpako, karịchaa, na-emeghe ụzọ maka ụmụnne ha ndị nwoke abụọ (Kylian na Ethan) ịgbaso.
Thorgan Hazard Biography- Afọ Nlebara Anya:
Dika nwanne nne nke okenye, Eden Hazard bu ihe nlere nye umuaka ya. Thorgan Hazard na World Cup afọ 1998, gbasoro nzọụkwụ ya site na ịbanye na klọb obodo ha, Royal Stade Bralorida. N'ebe ahụ, onye na-agba bọl na-eme n'ọdịnihu na-atọ ntọala dị mma maka ọrụ ya.
N'afọ 2003, ndị nne na nna Thorzan Hazard kwagara maka klọọkụ gbanwere nke ya na Eden. Ma nne ya na nna ya mere ka ha deba aha ha na Tubize, ụlọ ọgbakọ Belgium a ma ama nke dị n'obodo Tubize. Ọ bụ agụmakwụkwọ a ma ama maka imepụta ụmụ ha kachasị mma na klọb buru ibu na France.
Mgbe ọ dị nso na usoro ọrụ ọrụ ntorobịa ya, nna onye Belgium ahụ, Thierry kpebiri ịla ezumike nká site na bọl- kpọmkwem n'afọ 2009. Ọ lara ezumike nká iji tinyekwuo oge maka ụmụ ya nwoke, karịsịa Eden na Thorgan.
Dị ka ụzọ isi mepụta atụmatụ, ndị nne na nna Thorgan Hazard kpebiri na ụmụ ha nwoke ga-akwaga na klọb iche iji zere ịsọ mpi. Eden na 2005, hapụrụ aka France ka ọ sonyere Lille OSC. Afọ atọ ka nke ahụ gasịrị, Thorgan nwere ihu ọma nwetara onyinye site n'aka RC Lens mgbe o mechara nke ọma na asọmpi ndị ntorobịa.
Thorgan Hazard Biography- tozọ Gara Akụkọ Banyere:
Ọzọ, onye Belgium ahụ na-eto eto gbasoro nzọụkwụ nwanne ya nwoke site na ikwenye ịkwaga mba ọzọ iji gaa n'ihu n'ọrụ ntorobịa ya. Ndị nne na nna Thorgan Hazard nakweere onyinye maka ya na RC Lens. Gini mere klọb? Ihe kpatara nke a bụ n'ihi na ụlọ ọzụzụ ha ka mma karịa ihe ha nwere na Belgium.
Thorgan Hazard kọwara, “Ndị mụrụ m họọrọ ka m ghara ịnọ n'otu klọọkụ dị ka Iden.
Onye na-agba bọọlụ nke Belga ga-eme ọfụma na ụlọ ọgbakọ ọhụụ. Mgbe ọ nọ na Lens, Thorgan soro onye ọzọ na-agbachitere French Raphael Varane. Ha jikọtara aka nyere ndị otu ha aka na mmeri n'asọmpị 16-2008, na oge 2009/XNUMX.
Thorgan Hazard Biography- Bilie na Akụkọ Ama:
Iji mee ka nne na nna ya nwee ọ joyụ, obere nwa ahụ, n'afọ 2010, bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya. Oge ihe a rụzuru kwekọrọ na mgbe nwanne ya nwoke ukwu, Eden, ghọrọ ọfụma na LOSC Lille. N'oge ahụ, ndị isi European bọọlụ na - achụgharị Eden, nke bụ Chelsea FC.
N'abali iri abụọ na anọ nke ọnwa Julaị 24, nne na nna Thorgan Hazard kpebiri na ya na nwanne ya nwoke nke okenye bụ onye hapụrụ Lille jee Chelsea. N'ihi ewu ewu Eden, Chelsea gosipụtara na weebụsaịtị ya ozugbo na ha ekwenyela na Lens maka ịnyefe Thorgan.
Ndị ọkpụkpọ Chelsea ji ndidi chere ka ụmụnne abụọ a jikọta otu na Bridge, mana ọ dị nwute na nke ahụ emeghị. Ọ bụ ezie na Eden ka ndị London mara mma, ezigara Thorgan na mbinye ego. Nwatakịrị ahụ, mgbe ị na-akwụ ụgwọ ya bidoro ịtọgbọ ya onwe ya atụmatụ ịhapụ isi onyinyo nwanne ya - nke o mere !!
Mepụta Ihe hisga nke Ọma Ya:
Inweta ụzọ ọrụ dị iche bụ mkpebi kacha mma ka ọ na-eme ka ọ kawanye ọkaibe. Njem ego Thorgan Hazard buru ụzọ kpọta ya na klọb ọkachamara ọkachamara na Belgium, SV Zulte Waregem. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, onye ahụ na-eto eto, na oge ọ bụla ghọrọ onye isi klọb (ọ dị afọ 20).
Ọ kwụsịghị ebe ahụ. Ọ joyụ nke ezinụlọ Thorgan Hazard amabeghị oke na oge ha hụrụ na a na-asọpụrụ onwe ha na akpụkpọ ụkwụ ndị Belgium. Nke a bụ nturu ugo nyere ndị egwuregwu bọọlụ kachasị mma na Belgium.
Na-esi na Mmebi Iwu Iden ya:
Ccessga nke ọma na Belgium mere Thorgan Hazard njem laghachi England, mgbe ahụ, nloghachi na Bundesliga ozugbo. Nwa ahụ siri ike jiri ike wee gaa na Borussia Mönchengladbach, ihe esere nke hụrụ ya na-enweta ọkaibe nke Number 10 kachasị amasị ya na nwata.
Mgbe o kwusịrị ihe mgbaru ọsọ 46 na enyemaka 44 maka klọb ahụ, nwata ahụ kpebiri ịhapụ uwe nwata No10 dị obere maka Marcus Thuram. Thorgan kpọtụụrụ nne na nna ya tupu ya agbanwee Borussia Dortmund.
N'oge a na-ede Thorgan Hazard's Biography, ndị na-eme ihe nkiri na-ahụzi onye egwuregwu bọọlụ onye Belgium dị ka onye siworo na ndochi nwanne ya pụọ. Ekelere ya nke ukwuu maka ọtụtụ ihe ngosi ya dị iche iche, nke mepụtara ọtụtụ ebumnuche na enyemaka.
Obi abụọ adịghị ya, na-egwu egwu dị ka nke Erling Haaland, Jadon Sancho na Marco Reus emeela Thorgan, otu n'ime ndị egwu kachasị atụ egwu ịgba bọọlụ. Ndị ọzọ, dịka ha na-ekwu, bụ akụkọ ugbu a.
Banyere Nwunye Thorgan Hazard:
Dị ka nwanne ya nwoke nke okenye, onye ọkachamara na onye egwuregwu Belgium bụ nwoke lụrụ di na nwunye nwere obi ụtọ. Thorgan lụrụ na Marie Kindermans, nwa nwanyị Johan Kindermans, onye ugbu a, bụ onye ntụzi ọzụzụ ntorobịa na Anderlecht. Ha abụọ malitere dị ka ezigbo enyi tupu ha aghọọ ezigbo ndị enyi wee kpebie na ha ga-abụ di na nwunye.
Isi ihe anyị ga-eme, ma Thorgan na nwunye ya, Marie nwere nwa nwanyị aha ya bụ 'Elayna Hazard' tupu alụm di na nwunye ha. Agbamakwụkwọ ha bụ emume nzuzo nke mere gburugburu Disemba 2016, ya na ndị enyi ole na ole na ndị ezinaụlọ a kpọrọ ọbịa.
Nke ka nke a, e mere foto agbamakwụkwọ gosiri nwunye Thorgan Hazard na ya onwe ya ikpuchi ihu ha, n'ihi ndụmọdụ nzuzo nke onye na-agba ụkwụ. You maara?… Hazard na nwunye ya zeere akwụkwọ akụkọ ndị ahụ na-adọrọ adọrọ. Ha abụọ lụrụ na nzuzo na ngalaba ndekọ.
Ka ha na-etinye ndu a, onye na-ebuso ndị agha ọgụ na nwunye ya anabatala nwa ha nke abụọ - nwa nwanyị. Thorgan Hazard na-ekerukarị foto mara mma nke ya na nwunye ya na ụmụ ya ndị nwanyị ezumike. Ezinaụlọ nke Thorgan nwere nlegharị anya nlegharị anya nke anụmanụ, ịnya anyịnya karịa ilele oke osimiri na ụdị njem ndị ọzọ anya.
N’ikpeazụ, onye na-agba bọọlụ na Belgium maara etu esi etinye onwe ya n’ịchọpụta ezigbo nna na nwa na-enwe mmekọrịta n’ụlọ ya.
Tomara ụzọ onye Bọọlụ Belgium si ebi ndụ ya n'ọdụ egwuregwu ga-enyere gị aka ịmatakwu ụdị onye ọ bụ. Nke izizi, Thorgan bụ onye na-ewere ọnọdụ ọrụ ya (mpaghara egwuregwu bọl) bụ ebe zuru oke maka ebumnuche ya na okike ya.
Banyere nke a, onye Belgium na-edowe ozi gbasara ihe ndị ọzọ gbasara ime ihe nzuzo. Ihe atụ zuru oke bụ foto agbamakwụkwọ ya nke na - ekpughe naanị ihu ya na nke nwunye ya, Marie.
Eziokwu bụ, Ndị nne na nna Thorgan Hazard na-akpata ya n'ihi ịdị ala ya. Anyị nzọ, ị gaghị achọta onye na-agba bọọlụ na ebe a na-agba egwuregwu abalị ma ọ bụ na-enwe esemokwu ọ bụla na mpụga egwuregwu ahụ. Ndị a bụ nnọọ onye ibe dị ala nke na-agbadata n'ala!
Ọzọkwa, isi ihe dị mkpa ịkọ banyere ndụ onwe Thorgan bụ eziokwu ahụ bụ na ọ na-ahụ onwe ya dịka onye na-emegide nwanne ya nwoke, Eden. Agbanyeghị, na mpụga ahụ, ha abụọ dị mma nke ukwuu ma nwee obi ụtọ ịnọ na ụmụaka ibe ha.
Thorgan kpughere otu oge na ya na nwanne ya nwoke Eden. Nke ka nke ahụ, ọ bụ ebum n’uche ha ka ha kwe ka mmekọrịta ha na ụmụ ha nwee ọtụtụ mmekọrịta.
N'ime ihe niile na-elekọta mmadụ, onye Belgium anaghị achị ọchị na nri ya ma họrọ nke iji iPhone. Ka a sịkwa ihe mere o ji agba gburugburu ebe olulu ahụ dị ka ụyọkọ Duracell.
Thorgan Hazard Life- Net Worth na Cars:
Onye Belgium ahụ, mgbe ọ na-eke ihe gbasara ndu ya, nwere atụmatụ ruru ọnụọgụ ruru nde Euro 20. Thorgan na-enweta ego ya site n'ọrụ ya na football yana site na ụdị nkwado nke "Nike".
Ọzọkwa iji rịba ama, ndị Belgium nwere ụgbọ ala ndị dara oké ọnụ dịka Mercedes A-klaasị na Bentley. Know maara?… Ndị hụrụ BVB nwere obi ụtọ mgbe ha hụrụ Thorgan Hazard na-anabata onwe ya na klọb nke mbụ ya na Bentley. Na nchikota, ihunanya o nwere n’ebe ugbo ala di iche bu ihe diri ndi iche echiche ya.
Ndụ ezinụlọ Thorgan Hazard:
Ha bụ, obi abụọ adịghị ya, ndị ụlọ egwuregwu bọọlụ kachasị ama na akụkọ egwuregwu. Obi abụọ adịghị ya, o siri ike ịhụ ezinụlọ nwere ndị egwuregwu bọọlụ dị ugbu a na ndị lara ezumike nka- ndị otu ya niile (6 na mkpokọta). Ọ mara mma ịhụ etu ihe banyere Hazard siri gbasa.
Na nkebi nke akụkọ ndụ anyị, anyị ga-agwa gị ihe gbasara Thorgan Hazard's Family na-amalite site na ndị mụrụ ya dị mpako.
Banyere Thorgan Hazard Nna:
Papa Thierry dị ka a na-akpọkarị ya, bụ onye egwuregwu ịgba ezumike nká na onye na-elekọta ụmụ ya nwoke. Nna ahụ dị mpako na - abụbu onye egwuregwu na onye na - agbachitere La Louviere, otu ndị na - alụso izu ike na Belgium ugbu a.
Banyere mama Thorgan Hazard:
O siri ike ịhụ ndị nne nke ndị egwuregwu a ma ama bụ ndị bụbu ndị egwuregwu n'onwe ha. Carine Hazard, nne Thorgan bụbu onye na-agba bọl ụkwụ (onye na-eti ihe kpọmkwem).
You maara?… Mama Thorgan Hazard ka bụ onye na - eti ihe n'oge ọ dị ime maka nwanne ya nwoke nke okenye, Eden. Ọ lara ezumike nká mgbe ọ dị ime ọnwa atọ. Daysbọchị ndị a, Carine na-ahapụrụ di ya bọọlụ niile (Thierry) ka ọ na-elekwasị anya n'ime ka ezinụlọ na akụkọ ọdịnala ghara ịdị.
Banyere Thorgan Hazard Brothersmụnne:
Chọrọ usoro mmalite ọzọ nke nwanne ya nwoke nke okenye, Iden? Anyị echeghị otú ahụ !. Anyị ga-agwa gị naanị banyere nwanne nwoke nke abụọ Thorgan nke na-aza aha Kylian na Ethan.
Ọnye na-bụ Kylian Hazard?
Ọ bụ nwanne nwanne Thorgan dị obere. Ị maara?… Kylian Hazard ụmụnne ya ndị nwoke niile atọ na-ebuso ndị agha etiti agha. Onye Belgium ahụ, amụrụ na ụbọchị 5th nke August 1995, na-egwu Cercle Brugge, na ọgbakọ ọkachamara na obodo ya. Dị ka nnukwu nwanne ya, Kylian Hazard Gakwara na mgbazinye ego mgbe ọ banyechara Chelsea.
Ruo ọtụtụ afọ, e nweela asọmpi n'etiti anyị. Iden, mụ na Kylian kwetara na onye ọ bụla nke ga-egbu ihe mgbaru ọsọ kacha nta ga-akpọrọ ezinụlọ gaa nri na njedebe nke oge. ”
Thorgan Hazard gwara websaịtị egwuregwu- Germanbu Sportbuzzer.
Ònye bụ Ethan Hazard?
A mụrụ nke ikpeazụ n’ime ezinụlọ n’abalị 9th nke Ọgọstụ 2003. Ethan Hazard bụ onye na-agba bọl nke na-agba bọl na-akụ ọkpọ n'etiti ụmụnna ya atọ. Nwatakịrị ahụ achọghị ilepụ anya n'ike mmụọ nsọ karịa ịdabere na nwanne ya nwoke Thorgan.
Thorgan Hazard Eziokwu Eziokwu:
Na mmechi ngwụcha nke Biography anyị, anyị ga-agwa gị eziokwu banyere nwanne nwoke nke Iden nke ọ tọrọ.
Eziokwu nke 1: Rygwọ ụgwọ ọnwa na ụgwọ maka nwa amaala a:
Kwa Afọ € 1,800,000 £ 1,614,069 $ 2,00,703
kwa ọnwa € 150,000 £ 134,506 $ 167,253
Kwa Izu € 34,562 £ 30,992 $ 38,537
Kwa .bọchị € 4,937 £ 4,427 $ 5,505
Kwa elekere € 206 £ 185 $ 229
Kwa Nkeji € 3.4 £ 3 $ 3.8
Sekọnd € 0.06 £ 0.05 $ 0.06
Nke a bụ ihe Thorgan Hazard eritela uru kemgbe ị malitere ịlele ibe a.
You mara?… Nguzi onye amaala German nke na-akpata kwa ọnwa 3,770 euro ga-arụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala afọ atọ na ọnwa abụọ iji rụta euro 150,000 nke bụ ụgwọ ọnwa Thorgan Hazard. Ebe a, nkezi nwa amaala Bel kwesịrị ịrụ ọrụ afọ atọ na ọnwa isii.
Eziokwu nke 2: Ihe kpatara eji kpọọ ya ‘Thorgan’:
Nke mbu, emehiela aha ya maka aha- 'Trojan Horse.' Ndị nne na nna Thorgan Hazard nyere ya aha mbụ iji kwanyere onye agwa akpọrọ "Thorgal Aegirsson" nke gosipụtara akwụkwọ ọchị ọchị onye Belgium. Akwụkwọ a bu nke mbu putara n’azu.
You maara?… A mụrụ agwa a dị ajụjụ ọzọ na mbara ụwa ọzọ. Ndị mụrụ ya bidoro zụlite ya dị ka Viking mgbe oghere mbara ụwa gwụsịrị. Papa Thorgan Hazard na mama ha bụ ndị egwuregwu na-atọ ọchị, ihe mere ha jiri kpọọ nwa ha nwoke nke abụọ 'Thorgan'.
Eziokwu nke 3: Ntụnyere ihe banyere Brothersmụnne nke Hazard- Ihe na-egosi na Thorgan dị mma karịa Eden:
Mụ na gị amatala na ọ dịrịghị Thorgan imere onwe ya aha karịchaa mgbe nwanne ya nwoke nke okenye (Eden) bụ ọkaibe zuru ụwa ọnụ. Ka osi di, enwere oge ihe nlere ya mere otu mgbe ka o di nma karia nwanne ya, Iden.
Eziokwu nke 4: Okpukpe Thorgan Hazard:
Ihe anyi n’agha n’adiri n’agha banyere onye n’agha n’agha bu onye Katoliki, ikekwe o dighi eme ya. Mgbe nyochachara nke ọma na mgbasa ozi mmekọrịta ya, anyị chọpụtara na Thorgan ekwubebeghị ihe ọ bụla gbasara okpukperechi. Anyị na-eji ihe nketa agbụrụ ya nke Walloon, nke nwere ihe dị ka 70% nke ndị Katọlik kwubiri na, ọ nwere ike bụrụ Onye Kraịst (onye Katọlik anaghị eme ihe).
Yabụ, nke ahụ na-ewetara anyị na njedebe Thorgan Hazard Biography maka ugbu a. Ọ bụ nrigbu ọhụụ nke 2020 anyị mere ka anyị kpebie inye gị edemede a. N'oge a na-ede akụkọ ndụ ya, onye na-agba bọọlụ ọgụ apụtaghị na ọ kachasị elu.
Karịa, anyị chọrọ ikwere na atụmanya ọchụchọ gị ezutela banyere ajụjụ banyere Thorgan Hazard Family, Akụkọ nwata, nne na nna, nwunye, Ndụ onwe na ndụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ n’inwere mmasị ịmụ gbasara ụmụnne nke kacha njọ, jiri nwayọ lelee nke anyị Eden Hazard Biography.
Tebụl dị n'okpuru a ga - enyere gị aka ịnweta ozi ngwa ngwa na nkenke banyere Thorgan Hazard.
Aha n'uju: Thorgan Ganael Francis Hazard.
aha otutu: ToTo.
A mụrụ: 29 Machị 1993 na La Louvière, Belgium.
Ndị nne na nna: Carine Hazard (Nne) na Thierry Hazard (Nna).
Ụmụnne: Eden Hazard (nwanne nwoke nke okenye), Kylian Hazard (nwanne nwoke nke obere) na Ethan Hazard (nwanne nwoke nke obere).
Ndị Ezinaụlọ Ezinyere: Yannis Hazard (nwa nwanne), Leo Hazard (nwa nwanne) na Elayna Hazard (nwa nwanne nwanyị).
Ezinụlọ Ezinụlọ: Onye agbụrụ Bellonia nke Bellonia.
elu: 5 ụkwụ 9 sentimita asatọ ma ọ bụ mita 1.79.
Ezigbo Net: Nde Euro 20 (Nde 2020).
Education: Royal Stade Bralorida, Tubize na RC Lens.
Egwuregwu Ọnọdụ: Ndị na-agba bọl na Winger